Ukufana Nengwe: Okufanele ube Nakho Komsebenzisi We-Mac Mac | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 15, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Njengoba izinhlelo zokusebenza eziningi zebhizinisi ziphelelwa yiMicrosoft, iMac kusesebuhlungwini bokuqalisa kusimo sebhizinisi. Ukuvuselelwa okusha kweSystem Operating kusuka ku-Apple kunikeza ukukhululeka ngeBootCamp, uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi uqalise i-Intel-based Mac nge-OSX noma kwiWindows.
Ukubhoboza kabili, ingxenye enkulu, kufana nokusebenzisa amakhompyutha amabili ahlukene kwi-hardware efanayo, noma kunjalo. I-Bootcamp ilungile, kepha ukushintshela emuva naphambili akuyona into elula. Ukufana kuxazulule inkinga, noma kunjalo futhi kwahlanganisa imihlaba emibili yaba yizwe elibonakala lingalungile! Bengilokhu ngisebenza ngokufana (sibonga umngani, uBill) kusukela ezinhlotsheni zayo zokuqala.
Lapho kwethulwa ukuhlangana, kulapho izinto ezihlanyayo zaqala ukwenzeka… ukuba nedokodo, ibha yomsebenzi ne-bar's apple konke ewindini elifanayo kubonakala kungalungile konke! Okubi kakhulu? Ukuhudula bese uphonsa kusuka kuzinhlelo zokusebenza zeWindows kuye kuzinhlelo zokusebenza zeMac nangokuphambene nalokho. Hewu! I- Impikiswano yeMac vs. PC uyabekwa, angithi?
Akasadingi umculi wezithombe, umklami weWebhu, noma uchwepheshe wokuqinisekisa ikhwalithi yohlelo lokusebenza odinga izingcezu eziningi zehadiwe ukwenza okuthile okulula njengokuhlola ukuhambisana nesiphequluli se-Cross. Zonke zingasebenza ngaphandle komthungo kwi-Mac efanayo - kimi iMacBookPro.
Lapho ingwe iphuma, kwaba sengathi injabulo yami isiphelile! Ngonakalise i-XP futhi angikwazi ukwenza ukuthi izinhlelo zami zokusebenza zisebenze njengakuqala. Ngixolile, ngaze ngathatha nethuba lokuzibhalela abanye babantu kwaParallels uqobo. Babengabafana abalungile futhi bangiqinisekisa ukuthi usizo lwalusendleleni!
Kuleli sonto ifikile! Ukuvuselelwa kwakamuva kokufana kufake ezinye izici ezihambisana nokuhambisana okugcwele kweLeopard. Uma ufuna uhlelo lokusebenza olukhulu lomthandi womculo wakho we-Mac - kungenzeka kube njalo.
Uma ungumuntu we-PC futhi wethuka ngokusobala ngalaba bantu abapholile be-Mac - leli yithuba lakho lokuthi ube ne-apula elikhanyayo kwi-laptop yakho kepha usebenzise izinhlelo zakho ezinhle ku-Windows.
Tags: ukubalwa kwabantuimpendulo yomklamoucwaningo lwemaketheizinhlolovo ezenziwa onlineimpendulo yomkhiqizoindlela yokuphila yezokuxhumanaSurveyMonkeyucwaningo locwaningo lwemaketheubervuamathuluzi wokuqamba iwebhu
Dec 15, 2007 ngo-7: 34 PM
Angikasisebenzisi isibindi esanele sokuthola iMac yami yokuqala. Indodakazi yami yesinyathelo ifunga eyayo nomama wayo, omunye wami obalulekile, uhlala entshontsha iMac yakhe ngoba kuthiwa kulula ukuyisebenzisa. Ngakhula… (ngasuka enkingeni yobudala obuphakathi ngaya ngale kwegquma)… ku-Windows futhi ngiyangabaza ukushintsha. Ngabe othile uzonginika i-push ngendlela efanele. Kungani kufanele ngithenge iMac. Ngidinga ilaptop entsha futhi elula.
Dec 15, 2007 ngo-7: 42 PM
IMac yindlela ozohamba ngayo, ikakhulukazi manje ngokufana. Ukulungela ukufaka i-Leopard kwi-laptop yomkami. Emsebenzini wami wokugcina ngangifuna ilaptop ye-mac ukuthi ihlolisise isiphequluli esinqamula emshinini owodwa kunokufuna ilebhu yokuhlola.
Ngibe nedeskithophu yami ye-Mac iminyaka eminingi futhi angikaze ngibe nezinkinga ngayo njengokuthi ngivame ukusebenzisa i-PC namawindi.
Dec 15, 2007 ngo-7: 53 PM
Bengicabanga ukuthola lokhu ngomsebenzi wami mac, ngakho-ke ngingahlola amawebhusayithi kwiziphequluli ze-Windows… ngiyazibuza ukuthi ingakanani insika yengulube?
Dec 15, 2007 ngo-8: 18 PM
Akukubi kakhulu, Mike. Esimweni ngasinye se-OS osisethile, ungasetha inani lememori elihlobene. Ngine-2Gb ye-RAM futhi ngine-Windows XP egijima kuze kufike ku-1Gb.
Akuthathi amandla amaningi weprosesa ukusebenzisa i-OS - kepha izinhlelo ozisebenzisa kuzo ziyoba izingulube ukube bezingama-hogs ngaphambili.
Dec 15, 2007 ngo-11: 36 PM
Ngisebenzisa i-VMWare Fusion, engikholwa ukuthi iyindlela engcono, njengoba ibekiwe kakhulu. Uzokwenzani ngesibonelo sakho se-Parrallels Windows uma ufuna ukuthuthela ku-linux ngokuzayo? Akunankinga nge-Fusion…
Dec 16, 2007 ku-9: 52 AM
Angiqiniseki ukuthi iLinux ikusasa lami eliseduze kusuka kumbono womsebenzisi wedeskithophu. Ngokufana ngikwazi ukusebenzisa zonke izinhlelo zokusebenza zebhizinisi engizidingayo. Ngikwazi futhi ukusebenzisa i-Linux ngokufana (ngangine-Ubuntu phezulu kepha ngikuphazamise impela ukufakwa kwami!).
Ngingumuntu othanda ukubona kahle ne-VMWare. Ngihambisa imvelo yethu yokukhiqiza iye IBluelock, yinkampani esebenza kahle ngokwenza izinhlelo zokusebenza ezisingathiwe nge-VMWare.
Kuhle ukukubona lapha, Dale! Ngabona amaphepha e-ExactTarget IPO athunyelwa ku-SEC. Izinto ezinhle!
Dec 16, 2007 ku-3: 49 AM
Okuthunyelwe okumayelana nokwenza kahle nge-mac, futhi usho kuphela omunye wabadlali abakhulu? Lukuphi uthando lwe-VMWARE (engicabanga ukuthi luphakeme… lubukeka nje “lupholishiwe”).
Dec 16, 2007 ku-9: 55 AM
Ngiyesaba ukuthi ngiyi-newb uma kukhulunywa nge-VMWare futhi anginayo. Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi konke ebengikudinga kusebenza kahle ngokufana. Njengoba ngibhale uDale ngenhla, i-VMWare izoba yingxenye enkulu yokuthunyelwa kwethu komkhiqizo kungekudala, noma kunjalo. Sizokwazi ukuphindaphinda izindawo futhi silethe 'ukunambitheka' okuhlukile kwesicelo sethu ngonyaka ozayo.
Dec 17, 2007 ngo-2: 16 PM
Ngisanda kuthuthukisa ukufana kuya enguqulweni yakamuva, futhi manje iVista (iBusiness) idinga ukuthi ngiyisebenzise futhi, futhi ukusebenzisa i-inthanethi akusebenzi. Lokhu kwenzeka futhi uma ufuna ukusebenzisa i-VMware noma ukufana ngokuhlangana ne-bootcamp.
Dec 17, 2007 ngo-5: 39 PM
Kuzoba mnandi ukubona ukuthi iMicrosoft izobhekana kanjani nokwenza kahle kanye nenqubo yabo yokwenza kusebenze - into engingacabangi ngayo! Mhlawumbe lokhu kungenye yezinzuzo zokuhamba nephakethe elisha le-Microsoft, i-Hyper-V!
Dec 18, 2007 ku-12: 21 AM
Kuyaphazamisa kakhulu ukungakwazi ukusebenzisa zombili ifomu le-bootcamp leWindows eceleni kwefomu le-VMWare ngenxa yemikhawulo yokusebenza. (Ibona “izinguquko zehadiwe” futhi ikwenza ungasebenzi uma ushintshela kolunye uhlobo).
Angiyena ozonda iWindows nganoma iyiphi indlela, kepha lokhu kucace bha lapho ngithenga ikhophi elisemthethweni leVista Business.